Ramamimampionona Gérard: “Mila fitoniana politika izao” | NewsMada
Ramamimampionona Gérard: “Mila fitoniana politika izao”
“Anisan’ny fomba tsara ary efa fanao hatramin’izay, misy an’izay fitoniana politika izay rehefa misy zava-dehibe hatrehin’ny olona, ny mpiara-monina, ny vahoaka. Amin’izao Herinandro masina izao, samy tokony hieritreritra… Tokony samy hiverina ao anatiny avokoa ny olona, hahazoany ny hoe: inona ny ratsy tokony hialany?”
Io ny fanehoan-kevitry ny filoha lefitry ny Komitin’ny fampihavanam-pirenena (CFM), avy amin’ny faritany Antananarivo, Ramamimampionona Gérard, ny amin’izao Herinandro masina fanomanana ny Paska izao. Izay ilay hoe Herinandro masina: mba hahazoana mihavana kokoa amin’Andriamanitra. Manaikaiky kokoa an’Andriamanitra izany ka manatsara ny feon’ny fieritreretana mba hiara-belona Aminy.
Mba hisian’ny hoe fiainana vaovao, tsara raha mba misy fitoniana politika fa tsy fanakorontanana na fanambatambazana ivelany. “Aleo ilay tena herim-pahasoavana avy amin’Andriamanitra mba hirotsaka amin’ny olona fa aza kotabaina”, hoy izy. Hirotsaka amin’ny kandidà solombavambahoaka koa izany amin’izao fifidianana izao.
Tsy asiana loko politika ny asa soa
“Tsy mahefa na inona na inona isika, raha tsy eo ny fahasoavan’Andriamanitra”, hoy ihany izy. Izay no mampihavana sy mampilamina, ary manome fiainam-baovao. Mba hisian’izay fiainam-baovao izay fitsaharana politika izay. Tsara raha mba tony sy mangina avokoa aloha fa hery lehibe izany rehefa avy eo.
Raha tsy asiana loko politika ny hoe fanaovana asa soa fa tena fifampizarana: maimaimpoana izany fa tsy misy miverina na tambiny. Fa tsy hoe manao asa soa ny tena amin’izao mba hitodihan’ny olona any amin’ny tena. Ny hitodihan’ny olona amin’Andriamanitra no tena zava-dehibe amin’izao. Tena zava-dehibe izany raha hampitodika ny tena amin’Andriamanitra, ary mampitodika ny olona amin’Andriamanitra. Fa tsy hoe asa soa mampitodika ny olona any amin’ny tena. “Sao mitady haka ny toeran’Andriamanitra ny tena amin’izany?”, hoy izy.
Nefa na eo aza izay fijery sy faniriana ny hisian’ny fitoniana politika amin’izao ankatoky ny Paska izao: toa izao fialan-tsasatry ny mpianatra sy ny andro tsy fiasana lavalava amin’ny faran’ny herinandro izao aza no mety hohararaotin’ny sasany hanaovana hetsika politika?